ဆယ်ကျော်သက် နှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း ~ Myanmar Express
From : ခိုင်လေး(ရွှေတောင်)အကောင့်ထဲက တက်လာတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဖတ်ရင် ရှက်စိတ် ခံပြင်းစိတ် နှမြောမိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ဆက်ပြီး စကားပြောချင်စိတ်မရှိအောင်ဖြစ်နေသည်။ အကောင့်ထဲက အသက် 18နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောဆို အယူဆတွေ ဘာလို့ ဒီလောက်ထိပေါ့တန် ပေါ့ပျက်ပျက် နိုင်နေရတာလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို အထပ်ထပ်တွေးနေမိပါသည်။ အချိန်ကား နံနက် 9နာရီခန့်။ ရုံးသွားဖို့ ဖယ်ရီကားကို စောင့်နေချိန်မှာ ခိုင်လေးအိမ်ဖုန်းသို့ ဖုန်းသံလေးမြည်လာပါသည်။ ဇာဇာ ဆီမှဖြစ်နေသည်။ ခိုင်လေး ဆီတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဆက်နေကျမို့ ခါတိုင်းလိုပဲ ထင်ပြီး ရယ်သံလေး နှောပြီး ဖုန်းထူးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ဇာဇာ ဆီက မမျှော်လင့်ဘဲ ငိုချလိုက်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။ ခိုင်လေး စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ပျာယာခတ်သွားသည်။အကျိုးကြောင်းကို သေချာ ချော့မေးမှ သူအမျိုးသားက ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ငြိနေတယ်ဆိုတာကို သိခွင့်ရလိုက်ပါသည်။ ဇာဇာက နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ အင်တာနက်ဆိုင် လေးဖွင့်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ သူအမျိုးသားက မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ယောက်ပေါ့။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ချိန်ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကို တက်နေကြသူတွေ များပါသည်။ ဒီမှာ မြန်မာပြည်က အသက် 18နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ သဲ ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ ခင်းနေပါသည်။ ကောင်မလေးက လူပျိုလို့ထင်နေတာလား......အိမ်ထောင်ရှိမှန်းသိနေရက်နဲ့ ပတ်သတ်နေတာလားဆိုတော့ အဲဒီကလေးမသာ သေချာ သိနိုင်မှာပါ။ ယောကျာ်းကိုလဲ အတင်းကျပ်မပြောရဲ ကောင်မလေးကို ပြောဖို့လဲ အင်အားတွေ မဲ့စွာ ခိုင်လေးဆီ အားကိုးတကြီး အကူညီလှမ်းတောင်း ခဲ့ပါသည်။ ဇာဇာကို သေချာချော့မော့ နှစ်သိမ့်ပြီး ရုံးကိုထွက်ခဲ့ရပေမယ့် စိတ်တွေက အဲဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာဘဲ တစ်ဝဲ၀ဲလည်နေမိပါသည်။ ညနေရုံးကပြန်လာတာနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ကို လူက ရောက်နေမိပါပြီ။ အရင်ဆုံး ဇာဇာ အမျိုးသားအကောင့်ကို ဖွင့်လိုက်ပါသည်။ သူချာတိတ်မလေးနဲ့ ပြောထားတဲ့ chat mail တွေကို အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်လိုက်မိပါသည်။ ကောင်မလေးက မနှစ်က ဆယ်တန်းကျလို့ ဒီနှစ်ထပ်ဖြေထားပြီး အောင်စာရင်းကို စောင့်နေသူဖြစ်တာရယ်...မလေးကို သွားအလုပ်လုပ်ဖို့ အိမ်က ပိုက်ဆံ ထုတ်မပေးတာတွေ၊ သိပ်သွားချင်ရင် ကိုယ်ပိုက်ဆံ နဲ့ ကိုသွားဆိုတာတွေ စုံအောင်ပြောပြထားတာတွေကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ လိုရင်းကတော့ မလေးလာဖို့ ငွေထုတ်ပေးမယ့် စပွန်ဆာရှာနေတာပါဘဲ။ ဒါကို မိသားစုနဲ့ဝေး အထီကျန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကို လက်ကိုင်ထားပြီး ဖောက်ပြန်ခြင်း လမ်းကို စလျှောက်သူက ဇာဇာအမျိုးသား။ သဲ ခြင်းမိုးမွှန်အောင် ခေါ်ပြီးပလီပလာတွေ ပြောနေကြတာတွေကို ဖတ်ရတဲ့ ခိုင်လေးတောင် အတော်ကို စိတ်ပျက်မိနေရင် ဇနီးမယားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဇာဇာ ရင်ထဲက အပူမီးကကို တင်စားဖွယ် စကားလုံးမရှိနိုင်ပါဘူး။ ချက်မေးတွေ ဖတ်နေရင်းမှာဘဲ သဲဆိုတဲ့ ချာတိတ်မ အကောင့် မီးစိမ်းလာပါသည်။ ခိုင်လေးလဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ *သဲ *လို့ ခပ်တည်တည် ခေါ်လိုက်သည်။ *ကို* ဆိုတဲ့ ထူးသံက တန်းရောက်လာပါသည်။ ပထမတော့ ဇာဇာအမျိုးသားပုံစံမျိုးနဲ့ စကေားပြောကြည့်မလို့ပါဘဲ။ ပြောချင်စိတ်တွေကို ခံပြင်းစိတ်တွေက ဖုံးလွှမ်းသွားတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ဇာဇာ ပုံစံ ပြောင်းပြောလိုက်မိပါတော့သည်။ ဒီမှာဘဲ လောကကြီး ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲထင်ရလောက်အောင် အတွေးခေါ် တော်တော် အောက်တန်းကြလှတဲ့ မိန်းကလေး ငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားတွေကို နားနဲ့ ဆတ်ဆတ် ကြားလိုက်ရပါသည်။ *ကို မဟုတ်ဘူး....ညီမ ကိုလို့ခေါ်နေတာ မမ အမျိုးသားပါ.....အမျိုးသားဆိုတာ ချစ်သူမဟုတ်ဘူးနော်....မမယောကျာ်င်္း*ပါလို့ ခိုင်လေးဘက်က စာရိုက်လိုက်ပါသည်။ သူဘက်က ချက်ချင်းစာတက်လာပါသည်။ ခိုင်လေး ထင်ခဲ့တာက ဒီကလေးမက ဇာဇာအမျိုးသားကို လူလွတ်တစ်ယောက်လို့ထင်မယ်....ပတ်သတ်မိမယ်ပေါ့....ခိုင်လေးက အခြေနေမှန်ကို ပြောလိုက်လို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ အံ့သြတုန်လှုပ်သွားမယ်.....တစ်ကယ့်လက်တွေ့ကြားလိုက်ရတာတွေက တစ်ခြားဆီပါဘဲ။ တော်တော်ကိုဆိုးပါသည်။ဘုရားတောင်တမိ တယ်ဆို ပိုတယ်လို့ ထင်ပါလိမ့်မည်။ မတော်တရော် မကောင်းဆိုးဝါးတွေကပ်နေလားလို့တောင် စိုးရိမ်လိုက်မိပါသည်။ သူပြန်ပြောလိုက်တာလေးကတော့ *ဟားဟ........အမမို့ အွန်လိုင်းပေါ်က ကိစ္စတွေကို လိုက်ခံစားနေတယ်.......သဲတို့ လိုင်းပေါ်တက်လာရင် အပ်သမျှ အကောင့်တွေအကုန် လက်ခံတယ်..........လာကျူလဲ ပြန်ကျူလိုက်တယ်.........ပျိုတာ အိုတာတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မရှိဘူး။ စိတ်လဲ မ၀င်စားဘူး.........တစ်ခါမှလဲ ကို ကိုမမေးမိဘူး...လူပျိုလားလို့ပေါ့.........ဟားဟ .....ပြောရရင် အမအမျိုးသားနာမည်ကိုတောင် သဲ သေချာမမှတ်မိဘူး........မမ အမျိုးသားကို အမ နိုင်အောင်ထိန်းလေ* ခိုင်လေး ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့အောင်ကိုဘဲ ရင်ထဲ မောဟိုက်သွားမိပါသည်။ နောက်ဆုံးပြန်လိုက်မိတာလေးကတော့* ဟုတ်ပါတယ်ကွယ် .....မမ က နိုင်အောင်ထိန်းရအောင် သူက ကလေးမဟုတ်ဘူးလေ....ခုညီမကို ပြောပြတယ်ဆိုတာလဲ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ အမျိုးသားမှန်း မသိသေးဘူးထင်လို့ သမီးတစ်ယောက်လိုစာနာလို့ အသိပေးတာပါကွယ်.....ရှိလဲ ကိစ္စမရှိဘူးဆိုလဲ ညီမအပိုင်းပါဘဲ* လို့ရေးပြီးတာနဲ့ အကောင့်ကို ပိတ်ခါ ဇာဇာဆီပါတစ်ခါတည်းဖုန်းခေါ်လိုက်မိပါသည်။ အကောင်းဆုံး အကြံတစ်ခုကို ပြောပြလိုက်မိပါသည်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဇာဇာ မလေးကို လိုက်သွားချင်သွား...မသွားချင်ရင် မြန်မာပြည်ကိုသာ နင်အမျိုးသားကို ပြန်ခေါ်ထားလိုက်တော့လို့ ပြောပြလိုက်ပါ သည်။ ညဘက်ရောက်တဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်အောင် ကလေးမလေးပြောတဲ့ အကောင့်ထဲက စကားလုံးတွေက မျက်လုံးထဲမှာ တစ်ဝဲ၀ဲလည်နေမိပါ သည်။ အင်တာနက် ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းက လူသားထုတွေအတွက် ကောင်ကျိုး ၊ ဆိုးကျိုး တစ်ဝက်ဆီ ပေးနေသလိုပါဘဲ။ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ် လူငယ်တွေ လမ်းမှားအယူမှားတွေနဲ့ အင်တာနက်ဆိုတာကို ယောကျာင်္းရှာ ၊ မိန်းမရှာ စရာနေရာတစ်ခုလို စပွန်ဆာရှာစရာ နေရာတစ်ခုလို ဘာလို့ သဘောထားနေကြရပါသလဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ဆုံကာ တစ်ကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ခင် စုံဖက် လက်ထပ်သွားကြသူတွေ လည်းအများပြားရှိနေပါသည်။ ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုး 50 ...50 ဆီ ဖြစ်နေပါသည်။ သဲဆိုတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် 10 တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက် ရဲ့ အတွေးခေါ် ဆင်ခြင်နိုင်မှုတွေက ဘာလို့ ဒီလောက်ထိ အောက်တန်းကျနေ ရတာလဲ....ဘယ်ခေတ် ဘယ်စနစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းနေပြောင်းနေ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားရမယ် ဆိုတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းကိုတော့ ဘယ်သောအခါမှ ပြောင်းလဲ မေ့ပစ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အ၀တ်စားတွေ ခေတ်မှီလာသည်။ ပညာရေးတွေ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းရမယ့် အိနြေ္ဒတွေ သိက္ခာတွေကိုတော့ ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လိုက်ပါပြောင်းလဲဖို့ လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။ မိမ္မမိုက်စစ်တန်း (၁၇)ချက်မှာတောင် နံပတ် *(၃)တပါးလင်ယောက်ျားတို့ကို ရွှင်ပျကြည်သာစွာဧည့်ခံစကားပြောလေ့ရှိခြင်း။ *အမှုတွေကို ပြုလုပ် နေကြပါမှုလောကသံသရာ နှစ်ဖြာစလုံး ဆုံးရှုံးနှစ်မွမ်းရပါမည်ဟု ကျေးဇူးတော်ရှင် သာယာဝတီဆရာတော်ကြီးဧ။် သြ၀ါဒမေတ္တာစာအုပ် တွင် ပါရှိပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အသိတရားတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းတဲ့အနာဂတ် လူငယ်လေးတွေ အများပြားပေါ်ပေါက်လာစေချင်မိပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေ တော်တော် များ ကွန်ပြူတာလေး တစ်လုံးမှ မရှိရင် လူဖြစ်ရှုံးသလိုကို လူတိုင်း သုံးနေကြပါသည်။နည်းပညာတွေ တိုးတတ်စေသည်။...သတင်းအချက်လက်တွေ ချက်ချင်းသိရပါသည်။ .အကောင့်လေးကနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောနေရရင် တိုင်းတစ်ပါးမှာ တစ်ယောက်ထဲ အထီကျန်မှုတွေကို ပြေပျောက်စေပါသည်။.............ဒီထိတော့ ကောင်းနေသေးသည်။...ဒီထက် မထိန်းချုပ် နိုင်တဲ့ အခါမှာတော့ ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ....အိမ်ထောင်သည်တွေ ဖောက်ပြန်ခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်က စကားလုံးတွေထဲမှာ သာယာလာကြသည်။.....စကားလုံးတွေကို မျှော်တတ်လာကြသည်။....ဒီမှာ အစပြု လာတော့တာပါဘဲ။ နောက် ပေါ့ပျက်ပျက် အတွေးတွေ ၀င်လာကြသည်။....ငါတို့ အဝေးရောက်နေတာ ဒီထဲက စကား ပြောရုံနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ် မမည်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမှားတွေ တွေးမိကြပါတော့သည်။. ..အိမ်က မိန်းမတွေ .... အိမ်က ယောကျာင်္းတွေ မသိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဖောက်ပြန်ဖို့ လုံ့ဆော်တဲ့ အတွေး တွေ စတင်ဝင်ရောက်လာကြသည်။..........ဒီကနေ တဆင့်တက် နေရာဒေသတူနေရင် အပြင်မှာ တွေ့ကြပါသည်။ မ်ိန်းကလေးတွေကို အဓိက ပြောချင်မိပါသည်။....ဘယ်သူနစ်နာသွားပါသလဲ.........သေချာတွေးကြည့်ပါ။ အချိန်တန် ငွေပို့တာ မိမိတို့ ဇနီးမယားတွေဆီကိုပါဘဲ..........တကယ်တမ်းကျ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ဖြိုခွဲဖို့ကို ယောကျာင်္းဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တော်တော် တွေးကြပါသည်။ ..ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ လမ်းတစ်ခုကို မလျှောက်ကြပါနဲ့။ ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကို ရပ်တန့်ကြပါစေ။ အမျိုး ဘာသာ ၊ သာသနာ နှင့်ပညာတိုးပွား၊အကျိုးများစေသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဤ ဆောင်းပါးလေးကိုရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သိစေ၊ တတ်စေ၊ လိမ္မာကြစေလိုသော ဆန္ဒအမှန်ဖြင့် ဖော်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။မိန်းခလေးတစ်ယေက်လိမ္မာလျှင် အိမ်သာ၏။ရွာသာ၏။ မြို့သာ၏။ တိုင်းပြည်သာယာပါ၏။ ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်မိကြသောမိန်းခလေးတိုင်း အလိမ္မာလေးတွေအဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ကျပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်.... Myanmar Express
good article!! everyone should read!!
19 March 2012 04:29
That's the point I wanna say. Freedom is to use . Not to abuse. Democracy doesn't mean that to abuse internet.There are always pro and cons in everything . So internet is good if you use it. Internet is bad if you abuse it. Let me say one thing from my heart. Nowadays myanmar girls become like whores inside and outside Myanmar.They don't keep their dignity, virginity,selfsteem.Even if they don't consider for themselves, how they can consider for others.It's true.This word will be hard and rude.I know.So I write this comment in english.MEG, I will always be with you if you write this kind of article .Myanmar girls should keep their standard, dignity, virginity .Try not to be likeawhore.SV
သူငယ်ချင်း ယောကျားရဲ့ အကောင့်ကိုဒီလိုပဲလွယ်လွယ် ဖွင့်လို့ ရတယ်ဆိုတော့ခိုင်လေးနဲ့ဇာဇာ က တလင်တည်း မယားတွေနဲ့ တူတယ်ဟ ဟ
19 March 2012 07:17
ကောင်းမွန်သော အသိတရားတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းတဲ့အနာဂတ် လူငယ်လေးတွေ အများပြားပေါ်ပေါက်လာစေချင်မိပါသည်။ LIKE THIS :)
ဟဲ့..ကောင်မ...ညည်းကရောဘာလို.သူများအကောင့်ကို ခိုးကြောငိခိုးဝှက်နဲ. ကြည့်ရတာတုံး...ဘာလဲ..ညည်းကပါသူများလင်ကို ခိုးချင်လို.လား။
(ဟဲ့..ကောင်မ...ညည်းကရောဘာလို.သူများအကောင့်ကို ခိုးကြောငိခိုးဝှက်နဲ. ကြည့်ရတာတုံး...ဘာလဲ..ညည်းကပါသူများလင်ကို ခိုးချင်လို.လား။သူငယ်ချင်း ယောကျားရဲ့ အကောင့်ကိုဒီလိုပဲလွယ်လွယ် ဖွင့်လို့ ရတယ်ဆိုတော့ခိုင်လေးနဲ့ဇာဇာ က တလင်တည်း မယားတွေနဲ့ တူတယ်)ကောင်းတယ်..အပြောခံရတာ.ယုတ်တိယုတ်တာမရှိ..ရုပ်ကိုက လင်ငယ်နေမယ့်ရုပ်နဲ့..
20 March 2012 23:07
ဟုတ်တယ် ဒီမိန်းမက သူများအကောင့်ထဲလည်း ၀င်သေးတယ်ကြောင်သူတော်လုပ်ပြနေတယ်ခိုင်လေးဆိုတဲ့ အဲဒီမိန်းမ ဓာတ်ပုံနဲ့ပါ Myanmarexpress ကိုပို့လာတာအလုပ်မရှိအလုပ်ရှာ သူများကိစ္စထဲ နှာခေါင်းနှစ်ချင်တဲ့ မိန်းမမျိုးနင် ကိုတို့ သဲတို့ မလုပ်ရလို့ မနာလိုဖြစ်နေတာလား
နင်တို့မိန်းမယူရင် qခိုင်းလိုက်တခြားယောက်ျားတွေနဲ့ ပြီးရင် အပေါ်မှာနင်တို့ပြောသလိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာပြန်ပြော စောက်ရှက်မရှိတဲ့ယောက်ျားတွေ Password ကိုသူ့မိန်းမကပြောပြလို့ သိတာနေမှာပေါ့ငတုံးတွေရဲ့ အပေါ်ကစောက်ဆင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့မိန်းမယူပြီးရင် သူများတက်လိုးခိုင်းပြီး Share သုံးကြပေါ့ ဒီလိုလဲလုပ်မှာပါ ခုတောင်သူများမယားကြာခိုနေလို့ မစာမနာပြောနိုင်တာပေါ့ နင်တို့လိုယောက်ျားတွေကြောင့်ရှက်စရာပါလား
21 March 2012 08:05
လရောင်ဝါဆိုတဲ့ ကောင်မက ဘာနာနေသလည်းခိုင်လေးဆိုတဲ့ ကောင်မက မျက်နှာကြီးစောက်ရှက်မရှိအွန်လိုင်းပေါ်ပြပြီး ကြော်ငြာဝင်နေတာ နင်ကပါ စောက်ရှက်မရှိဓားခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှို ချင်နေသေးတယ်။ နင့်စောက်ပူပါလား။ခိုင်လေးဆိုတဲ့ ကောင်မက သူများလင်မယားကြားဝင် သူတော်စင် လုပ်ချင်နေတာသူ့လင် သူ့မယား ရှင်းပါစေဓာတ်ပုံကြီးပြပြီး နာမယ်ကြီးချင်နေတဲ့ ကောင်မ
ဟာ စောက်ဆင့်မရှိလိုက်တာ စကားပြောတာ။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ တိုင်ပင်မိမှာပဲလေ။ ခုခေတ်ကောင်မတွေ စောက်ရှက်မရှိတာကလဲ တရားလွန်တယ်။ အကောင်တွေကလဲ တန့်ကနဲဆို နန့်ချင်နေကျတယ်။ ခွေးတွေ အမြီးနန့်တာကျနေတာပဲ။ အမည်မသိဆိုတဲ့ အကောင်ကလဲ ၀င်ရှင်းသေးတယ် စောက်ရှက်မရှိ။
21 March 2012 20:09
tweety ဆိုတဲ့ ဟာမမင်းကကောဘယ်လောက်တောင် အဆင့်ရှိသလဲဟားဟားဟားစောက်ရူးမတွေ
23 March 2012 08:08
kaung par tal
မင်းဘာလို့ အင်တာနတ် ၀င်တာလဲ ချစ်တင်းနှောတဲ့ ၀က်တွေကော ကြည့်ဖူးလား မကြည့်ဘူးရင် ခေတ်နောက်ကျမယ်
မဆိုင်ဘူးလေကွာ..ဇာဇာကသူ့ယောက်ျားရဲ့အကောင့်ကိုသိနေမယ်.. အဲဒီတော့ သူ့ယောက်ျားနဲ့ သဲဆိုတဲ့မိန်းကလေးတို့ရဲ့အနေအထားကို ခိုင်လေးသိရအောင် သူ့ယောက်ျားအကောင့်ကိုဝင်ကြည့်ဖို့ ခိုင်လေးကိုအကောင့်ပေးလိုက်မယ်.. ဒါပဲပေါ့ကွ...
ငပေါမတွေဇာဇာတဲ့ ခိုင်လေးတဲ့ သဲတဲ့အပြာဝတ္ထုတွေထဲက ဇာတ်ကောင်နာမယ်တွေလိုပဲနော်
17 May 2012 00:12
သြော် ခိုင်လေး ရွှေတောင်ဆိုတာ ဒီဟာမကြီးကိုး :)
မနေ့ ကကွန်မန့် တွေအများကြီးရေးပါတယ်..ဟားးးးးးးဘဲဖော်ပြဘို့ လက်ခံတယ်ဆိုတော့..သိတော့ဝူး..စဉ်းစာသာကြည့်...ဆဲတာလည်းတခုမှရေးဘဲနဲ့ ..
ယောက်ျားဆိုတဲ့သူကရော password ကို သူမိန်းမကို ပေးပါ့မလား သဲဆိုတဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ Q ထားတဲ့ အကောင့်ကို အဲဒီလောက်တုံးမယ်မထင်ဘူး.. အကောင့်တွေ ပေါ်ချင်းသော်ချင်းလုပ်လို့ရနေတာပဲ သူ့မိန်းမကလဲ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ သူကိုယ်တိုင်း အချိန်ပြည့်ဖွင့်ပြီး ပြောလို့ရတာပဲ ခိုင်လေးဆိုတဲ့သူပြောမှမဟုတ်ပါဘူး....
ဒေါ်စုက ဒီကမြင်းမ အိုက်တင်ယူဓာတ်ပုံရိုက်ခံသေးတယ်လေခေါင်းကြီးစောင်းထားတာ ဒီကမြင်းက ဒီဇိုင်းအတိုင်းပဲသြော်..ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကမြင်းမကြီးဘဲကိုး
ဟေ့..နာတို့ ဒေါ်စုကို မထိနဲ့ဟေ့..သူက တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားဖို့ ဈေးညှိနေတယ်.. ဈေးကိုက်ရင် ခိုင်လေး(ရွှေတောင်)တို့၊ ဇာဇာတို့၊ သဲသဲတို့လို လင်လုစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..အကုန်လုံးကိုယ်........ချင် တာ...........လို့ရပြီလေ... ဟုတ်ဘူးလား...ဟိ..ဟိ..ဒေါ်စုအဖေတော့အားနာပါတယ်...သူ့အကြောင်းတွေက တော့ အခြေအနေမကောင်း.....သူလဲမကြာခင်ဂျောင်းမှာ ပါပဲ... အားလုံးဆက် ပွားနိုင်ကြပါစေ...
သူ တို့ က မ ယားသုံးယော က် လ လ င် တ စ် ယော က် လား
အော် လောကကြီး နေ၀င်ချိန်နီးလာပြီပဲ ရကြလော့
အဲဒါဘယ်သူတွေလဲဒီမိုကောင်တွေနဲ့ လှဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဖင်သရမ်းဒီမိုမတွေလား
Absoluty agree with u.
6 June 2012 14:01
khot yar ta lwe shar ya ta char phyit nay b. tint sin twat lo nar nay tar lar hin?
yes ,and thank
10 June 2012 06:48
ဟုတ်တယ်ဟ သူကြော်ငြာနေတာ ဖြစ်မယ် ။ အွန်လိုင်းဆိုတာ စပွန်ဇာရှာတဲ့ နေရာတဲ့ သူပြောတယ် ။ ကဲ ကဲ ဒိတ်မယ်.....အရင် အကေါင့်လေးပြော နော် ..... တို့ အက်လိုက်မယ်..
10 June 2012 17:35
သုံးယောက်လုံးထဲမှာ (အပေါ်ယံ)အဖြေ၇ှာကြည့်၇င်ယောင်္ကျားဖြစ်သူမှားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့၇ှုပ်လည်း၇ှုပ်ချင်သေးတယ်မိန်းမလုပ်သူကိုလည်းpsaaword ကလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်၇ူးနေတာပေါ့
ယောင်္ကျား လုပ်တဲ့ ကောင် မှား တယ် မိန်း မ ကို password ပေး ထား ၇ တယ် လို့ 
ိသူ တို့ တွေ ဘာ တွေပဲ ဖြစ်နေ ဖြစ် နေ ငါ တို့က အ ဓိက က message ရ ဖို့ ဘဲမ ဟုတ် လား. Password ဘယ်က ရ လဲဆိုတာ ဒွိဟ ဖြစ်ချင် စ ရာ မှန်ပါ တယ်။ြ ဖစ်နိုင် ခြေ အမျိုး အမျိုး ရှိ နိုင်တာ ကြောင့် ကောင်ကွက် က လေး တွေ ကို ရှာ ယူ သင့် တယ် လို့ ထင်ပါ တယ်။
ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော စောက်ရှက်ကိုမရှိတဲ့ ကောင်မတွေ သူများတွေကိုလျှောက်မပြောကြနဲ့ ခုခေတ်ကောင်မတွေကကော ဘယ်လောက် သစ္စာရှိလို့လည်း အရှက်တရားဆိုတာလည်း ဝေလာဝေး ဖြစ်တော့မှ အဖေကယ်ပါ အမေကယ်ပါ မလုပ်နဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ နှာခေါင်းသာမပါရင် ချီးကျွေးလည်းစားမဲ့ဟာတွေ
2 July 2012 02:48
2 July 2012 02:49
3 July 2012 02:29
Comments more interestable than Main Information
don't waste your time. this is none of your business
6 July 2012 11:57
Same Husband ,2wives ?
6 July 2012 23:58
အမည်ဖော်သူသို့ ခင်ဗျား အရေးအသားကောင်းတယ်။
ဘာတွေလဲ၊ နားမလည်တော့ဘူး။ ယောက်ျားတွေကတော့ ဒီလိုဘဲ။ မိန်းမတွေက ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေသင့်တယ်။ ဒို့လဲ လှတာတွေ့ရင် မိန်းမရစောတယ်လို့ ထင်မိတတ်တယ်။
29 July 2012 23:02
ခိုင်လေး(ရွှေတောင်) က အွန်လိုင်းပါး မဝ သေးလို့ ဒီစာကိုရေးတာဘာ အွန်လိုင်းထဲမှာက အဖွားကြီးတွေတောင် ၁၈ နှစ်လို့ ပြောနေကြတာဘဲ ဒါတွေက ရိုးနေပြီလေ
မိန်းကလေးတိုင်းက ဒါတွေကို သိနေ၇ဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့...........
She can give her husband account to check the situation. She is getting suggestion from her friend .. What the hell is going on in your brain ? G
စောက်ရူး။ မိန်းမကို passwrd ပေးရတယ်လို့ 
ကောင်းတာတွေစား ကောင်းတာတွေမလုပ်မင်းလူပေါင်းမှားနေတော့ငါတို့ ပြင်ပေးလို့ခက် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
အပေါ်ကComment ရေးတဲ့သူတွေ မင်းတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လျှောက်ရေးနေရတာလဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင် ရင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုနေမှပေါ့နေရာတကာဝင်ဝင်ပါတတ်တယ် မင်းတို့နဲ့အမျိုးတော်နေလို့လား ယု
သူတို့အမေတွေက အလုပ်ခံနေကြ ဆိုတော့ အလုပ်မခံတဲ့ လုတွေက စောက်ရူးပေါ့။ အဆင့်မရှိတဲ့ အကောင်တွေ။
ေ သြာ် လူ တွေ ကိုယ့် မျက် ချေး မမြင်ဘဲ သူ များ မျက်ချေးပဲ မြင် တတ် ကြ တယ်
ဒါကတော့ ဒီလိုပါပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် အွန်လိုင်းချစ်သူဆိုတော့ လေထဲမှာပဲ ပြောတွေ့ပြီး လေထဲမှာပဲလွင့်သွားမှာပါ စိုးရိမ်မနေပါနဲ့
Aww...after I read above comments, now I realize that 80% of Myanmar girls thinking that destroying other people family is innocent. Very low standard and narrow minded peoples. Very shameful for Myanmar.
5 February 2013 21:56
အပေါ်က တစ်ယောက်က eng အရမ်းတော်တာပဲနော်။လေးစားတယ်ကွာ။ဟိ ဟိ
ယုတ်ညံ့တဲ့မိဘက မွေးပြီး၊ ယုတ်ညံ့တဲ့ အသိုင်းဝန်းမှာပဲ ရှိနေဆဲမို့ ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေနဲ့ ပြောဆိုနေတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်လို့ရပါတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကောင်းလေးထားကြည့်ပါ၊ မင်း ငြိမ်းချမ်းမှုရမှာပါ။
မနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူများလင်မယားကြားထဲ ၀င်ပါမိတော့ ခုလိုအပြောခံရတာပေါ့ နောက် အရှက်မရှိ ဓါတ်ပုံပါတင်ထားလိုက်သေးတယ်...
21 March 2013 17:52
စိတ်တော့မပူပါနဲ့ ဘယ်သူမှ အတည်မကြံတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကဇာတ်လမ်း ဆိုတော့ အဲဒီကောင်မလေး မှ မဟုတ်ဘူး ဘယ်မိန်းကလေးမဆို ဒီိလိုပဲပြော မှာ ကိုယ်လူကို နိုင်အောင် ထိန်းတာက ပိုသဘာဝ ကျတာပေါ့ ဒါနဲ့တရားရှိတယ်ပေ့ါ နာမည်ပါကြီးချင်လို့ ဓာတ်ပုံပါတင်ထားတာလား တွေ့လား ဘယ်သူကမှအထင်မကြီးတဲ့ အပြင်ရစရာမရှိအောင် အပြောခံရတယ် အဲဒါပဲအွန်လိုင်းဆိ်ုတာ နာမည်ကြီးချင်ရင် ဒီထက် comment ပေးနိုင်တဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွေပေါပါတယ် ကြည့်ကြပ်ပြီးးးးးးးဇာတ်လမ်းဆင်ပေါ့ Anonymous
သဲလို မိန်းမမျိုးကို တွေ့ဖူးပါတယ် တို့အမျိုးသားနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တာပါ တို့က ဇာဇာထက် အဖြစ်ဆိုးပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက် အပြင်မှာ တွေ့ပြီးမှ သိခဲ့ရတာပါ ပိုဆိုးတာက ကောင်မလေးက အိမ်ထောင်သည် သမီးတစ်ယောက်အဖေမှန်း သိရက်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာပါ တိုိ့အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက တို့အမျိုးသားကို လက်မထပ်ခဲ့ပါဘူး ဇာဇာကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်